ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး – MATE
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 12, 2018 ကိုယ္​ဝန္​ပ်က္​က်ၿပီး အခ်ိန္​ဘယ္​​ေလာက္​ၾကာရင္​ ကိုယ္​ဝန္​ထပ္​ယူလို႔ရမလဲ။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 မီးဖွါးပြီး မေမေတို့ ရွေးချယ်စရာ ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ
မမေတေို့ရေ…. မိတျမြိုးဆကျပှားကနြျးမာရေးက ဒေါကျတာသီရိပါ။ မီးဖှားပွီးကိုယျဝနျတားတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ရှငျးပွထားတဲ့ Post ပကြျသှားလို့ပွနျတငျပေးတာပါ။ အမြိုးသမီးတှမှော ရာသီမလာခငျ ၁၄ ရကျမှာ သားဥကွှတောပါ။ ရာသီလဲပွနျမလာသေးဘူး၊ မိခငျနို့လဲတိုကျနပေမေယျ့သားဥကွှခြေိနျမှာ ကိုယျဝနျတားနညျး တခုခုမသုံးဘဲ အတူနမေိရငျ ကလေးမီးဖှားပွီး သုံးပတျလောကျနဲ့ နောကျထပျကိုယျဝနျပွနျရသှားနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ တခြို့မိသားစုတှမှော အထကျအောကျ ကလေးလေးနှဈယောကျ ၁၀လ လောကျပဲခွားပွီး ရှိနနေိုငျတာပါ။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အချိန်ဘယ်လောက်ခြားသင့်လဲ
မင်္ဂလာပါ ‘ မိတ် ’ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှကြိုဆိုပါတယ် မေမေတို့ရေ…ကိုယ်ဝန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုခြားတာက မေမေတို့ကျန်းမာရေး အတွက်ရော သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးရော အနာဂတ်ဘဝလေးတွေရောအတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးနို့တိုက်မိခင်မိခင်တွေမှာဆိုရင် အာဟာရဓါတ်တွေ အထူးသဖြင့် သံဓါတ်၊ ဖောလစ်ဓါတ်တွေ (iron, folate) စတာတွေကို လုံလောက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်လည်မဖြည့်တင်းနိုင်သေးပါဘူး။ နောက်တစ်ကြိမ်ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့ သားအိမ်အနေထား မျိုးပွားစနစ်အနေအထား ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖွံဖြိုးဖို့ကို လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သတိပြုစရာလကခ္ဏာများ
မေမေတို့ရေ…… ဒီတစ်ခါတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ် ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေသင့်ပါဘူးနော် … ဆရာဝန်ဆရာမကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတိုင်းသားအိမ်ခြစ်စရာလိုလား ???
သားအိမ်ခြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးနောက် သားအိမ်အဝလေးကို ချဲ့ပြီး သားအိမ်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ သန္ဓေသား ရဲ့ အကြွင်းအကျန်လေးတွေကို ဖယ်ထုတ်တာပါ။ အကြီးစားခွဲစိတ်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့အိပ်စက်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ ‘မိတ်’ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှကြိုဆိုပါတယ်… အခုတစ်ခါတော့ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေအမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့အိပ်ရင်အကောင်းဆုံးလဲ??? ဘေးတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီးတော့ဒူးကိုကွေးထားတဲ့အနေထားကအကောင်းဆုံးပါ။ ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ့လိုအနေထားနဲ့ အိပ်တဲ့အခါ ကလေးနဲ့အချင်းဆီကိုသွေးရောက်တာများတဲ့အတွက်ကလေးဆီကိုအာဟာရဓါတ်တွေများများ ပိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘေးစောင်းပြီးအိပ်တဲ့အခါ ဗိုက်အောက်မှာ ၊ ခြေထောက်အောက်မှာ ၊ ကျောနောက်ဖက်မှာ ခေါင်းအုံးခံပြီးအိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ မှောက်အိပ်ရင်ရောအန္တ ရာယ်ရှိလား??? ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်လရင့်လို့ဗိုက်ထွက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ မှောက်ပြီးအိပ်တာက သက်တောင့်သက်ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မအိပ်သင့်တဲ့အနေအထား??? ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာပက်လက်လှန်ပြီးမအိပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းမှာသိပ်ပြသနာမရှိပေမယ့် ကိုယ်ဝန်လရင့်လာတဲ့အခါ တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့သားအိမ်က ကျောရိုးမှာရှိတဲ့သွေးပြန်ကြောကို သွားဖိထားသလိုဖြစ်ပြီး နှလုံးဆီကိုသွေးရောက်တာနည်းသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ခေါင်းမူးတာ၊ အသက်ရှုလို့မဝတာ၊ နှလုံးခုန်မြန်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်ဖို့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ??? – ကဖင်းဓါတ်ပါတဲ့အစားသောက်တွေကိုရှောင်ပါ။ ဥပမာ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ချောကလက် – ရေနဲ့အရည်ပါတဲ့အစားသောက်တွေကိုမနက်ပိုင်းများများသောက်ပြီး ညနေပိုင်းမှာလျော့သောက်ပါ ဒါဆိုညဖက်ဆီးခဏခဏသွားချင်လို့ထရတာနည်းသွားပါလိမ့်မယ် – …
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိဘယ်လိုသိ?
မင်္ဂလာပါ ‘ မိတ် ‘ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှကြိုဆိုပါတယ်… ဒီတစ်ပါတ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းရာလေးကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ…
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကလေးလေးမွေးတော့မယ့် မေမေတို့ သတိပြုနိုင်ဖို့
ခှဲမှေးမယျ့မမေတေို့…… မှေးတဲ့အခြိနျမနာအောငျ ခါးကြောရိုးထုံဆေးထိုးပွီး ရိုးရိုးမှေးမယျ့ မမေတေို့…… အားလုံး အတှကျ ကြှနျမရဲ့ ဆေးရုံနှဈခါပွနျတကျလိုကျရတဲ့ အတှေ့အကွုံ့လေးကို ဝမြှေပေးခငြျလို့ပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့လတုနျးက ခါးကြောရိုးထုံဆေးထိုးပွီး အရေးပေါျခှဲစိတျမှုတခုခံခဲ့ရပါတယျ။ ခှဲခနျးကထှကျလာတဲ့ အခြိနျမှာ ခွောကျနာရီတိတိမလှုပျပါနဲ့၊ ခေါငျးအုံးမအုံးပါနဲ့၊ ခေါငျးကိုဟိုဘကျဒီဘကျတောငျ မလှညျ့ပါနဲ့ ဆိုပွီး မေ့ဆးဆရာဝနျကွီးကမှာလိုကျပါတယျ။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတို့ သိဖို့ – ၈
မင်္ဂလာပါမေမေတို့ရေ….မိတ်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှကြိုဆိုပါတယ်… ဒီနေ့တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ အမေးများတဲ့ အာထရာဆောင်း အကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတော်တော်များများက အာထရောင်းရိုက်တယ်ဆိုတာ ဗိုက်ထဲကကလေးလေးက ယောကျ်ားလေးမိန်းကလေးသိဖို့အတွက်လို့ပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး September 6, 2018 ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတို့ သိဖို့ – ၇
သားအိမ်ပြင်ပမှာသန္ဓေတည်ခြင်း သားအိမ်ပြင်ပမှာသန္ဓေတည်တယ်ဆိုတာ လူအများစုက ကြားဖူးနားဝသိပ်မရှိပေမယ့် စောစောသိရင်တော့ မိခင်အသက်ကို ကယ်နိုင်ပြီး နောက်ကျသွားရင် ရုတ်တရက် အသက်ပါဆုံးရံှုးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတခုပါ။